Ita Zvinoenderana Nemunyengetero waJesu | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Baba, . . . kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana wenyu akukudzei.”—JOH. 17:1.
‘Kunyatsoziva’ Mwari kunosanganisirei?
Munyengetero waJesu uri pana Johani chitsauko 17 wakapindurwa sei munguva yevaapostora?
Mazuva ano tingaita sei zvinoenderana nemunyengetero waJesu?
1, 2. Tsanangura kuti Jesu akaitirei vaapostora vake vakatendeka pashure pokunge vadya Paseka muna 33 C.E.
HWAINGE hwatova usiku musi waNisani 14 mugore ra33 C.E. Jesu neshamwari dzake vainge vapedza kudya Paseka, iyo yaivayeuchidza nezvekununurwa kwakaitwa madzitateguru avo naMwari kubva muuranda muIjipiti. Asi vadzidzi vake vakatendeka vainge vava kuzowana “kununurwa kusingaperi.” Zuva raitevera racho, Mutungamiriri wavo asina chivi aizourayiwa nevavengi vake. Asi kuurayiwa ikoko zvine utsinye kwaizoguma nokukomborerwa. Ropa raJesu raizoita kuti vanhu vakwanise kununurwa muchivi nerufu.—VaH. 9:12-14.
2 Kuti tisazokanganwa chipo ichi chinokosha, Jesu akatanga chiitiko chitsva chaifanira kuitwa gore negore chakatsiva Paseka. Akaita izvozvo nokumedura chingwa chisina mbiriso, uye paaichitenderedza kuvaapostora vake 11 vakatendeka, akati: “Ichi chinomirira muviri wangu uchapiwa nokuda kwenyu. Rambai muchiita izvi muchindiyeuka.” Akaitawo izvozvo nekapu yaiva newaini tsvuku, achivaudza kuti: “Kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu, ramuchadururirwa.”—Ruka 22:19, 20.
3. (a) Kuchinja kupi kukuru kwakaitika pashure pokunge Jesu afa? (b) Mibvunzo ipi yatinofanira kufunga nezvayo ine chokuita nemunyengetero waJesu uri muna Johani chitsauko 17?
3 Sungano yoMutemo yakaitwa naMwari nerudzi rwaIsraeri yainge yava kuzoguma. Yaizotsiviwa nesungano itsva yaJehovha nevateveri vaJesu vakazodzwa. Jesu aiva nehanya chaizvo nerudzi rutsva urwu. VaIsraeri vainge vasina kana kumbobatana pakugarisana kwavo uye pane zvokunamata, uye izvozvo zvaizvidzisa chaizvo zita dzvene raMwari. (Joh. 7:45-49; Mab. 23:6-9) Asi Jesu aida kuti vateveri vake varambe vakanyatsobatana kuitira kuti vashande pamwe chete kuti zita raMwari rikudzwe. Saka Jesu akaitei? Akapa munyengetero wakanaka chaizvo uye vanhu havambofi vakawana mumwe munyengetero wakanaka seuyu. (Joh. 17:1-26; ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) Patinenge tichiongorora munyengetero uyu ngatifungei nezvemibvunzo iyi: “Mwari akapindura munyengetero waJesu here? Ndiri kuita zvinoenderana nemunyengetero iwoyo here?”
ZVAINYANYA KUKOSHESWA NAJESU
4, 5. (a) Tinodzidzei kubva pamatangiro akaita Jesu munyengetero wake? (b) Jehovha akapindura sei chikumbiro chaJesu chaiva nechokuita neramangwana rake?
4 Jesu akataura nevadzidzi vake kusvika pakati peusiku, achivadzidzisa zvinhu zvinokosha nezvaMwari. Akabva atarira kudenga akanyengetera achiti: “Baba, awa yasvika; kudzai mwanakomana wenyu, kuti mwanakomana wenyu akukudzei, zvamakamupa simba pamusoro pevanhu vose, kuti, pamusoro pavose vamakamupa, avape upenyu husingaperi. . . . Ndakakukudzai panyika, ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite. Zvino imi Baba, ndikudzei parutivi rwenyu nokukudzwa kwandaiva nako parutivi rwenyu nyika isati yavapo.”—Joh. 17:1-5.
5 Ona kuti mumunyengetero wake, Jesu akatanga nokutaura zvaainyanya kukoshesa. Ainyanya kukoshesa kukudzwa kwaBaba vake vokudenga uye izvi zvinoenderana nechikumbiro chake chokutanga mumunyengetero wokuenzanisira paakati: “Baba, zita renyu ngaritsveneswe.” (Ruka 11:2) Muchikumbiro chake chechipiri, Jesu akataura zvaidiwa nevadzidzi vake, kuti “avape upenyu husingaperi.” Apedza kutaura izvi akazokumbirawo zvaiva nechokuita naye achiti: “Baba, ndikudzei parutivi rwenyu nokukudzwa kwandaiva nako parutivi rwenyu nyika isati yavapo.” Jehovha akapa Mwanakomana wake akatendeka mubayiro unopfuura zvaainge akumbira nokumupa “zita rakanaka kwazvo kupfuura mazita” engirozi dzose.—VaH. 1:4.
‘KUZIVA MWARI WECHOKWADI CHETE’
6. Vaapostora vaifanira kuitei kuti vawane upenyu husingaperi uye tinoziva sei kuti vakabudirira?
6 Mumunyengetero wake, Jesu akataurawo zvatinofanira kuita sevanhu vane zvivi kuti tiwane upenyu husingaperi. (Verenga Johani 17:3.) Akati tinofanira kuramba ‘tichiwana zivo’ yaMwari naKristu. Nzira yokutanga yokuwana nayo zivo ndeyokuita zvose zvatinogona kuti tidzidze nezvaJehovha uye Mwanakomana wake. Yechipiri ndeyokushandisa zvatinenge tadzidza nezvaMwari muupenyu hwedu. Vaapostora vainge vatevedzera nzira idzi dzinowanisa upenyu nokuti Jesu akaenderera nomunyengetero wake achiti: “Ndakavapa mashoko amakandipa, vakaagamuchira.” (Joh. 17:8) Asi kuti vawane upenyu husingaperi, vaifanira kuramba vachifungisisa zvakataurwa naMwari uye kuzviita muupenyu hwavo. Vaapostora vakatendeka vakabudirira here kuita izvi muupenyu hwavo hwose vari panyika? Chokwadi vakabudirira. Izvi tinozviziva nokuti zita romumwe nomumwe wavo rakanyorwa pamatombo enheyo 12 eJerusarema Idzva rokudenga.—Zvak. 21:14.
7. Kuziva Mwari kunorevei, uye nei kuchinyanya kukosha?
7 Maererano nenyanzvi dzemutauro wechiGiriki, mashoko echiGiriki akashandurwa kuti “kuramba vachiwana zivo” anogona kushandurwawo kunzi “kuramba vachiziva.” Pfungwa idzi mbiri dzinopindirana uye dzose dzinokosha. Saka ‘kuramba uchiwana zivo’ zvinoreva kuramba uchidzidza kusvikira wava ‘kuziva’ Mwari. Asi kuziva Mwari hakurevi kungoziva unhu hwake nechinangwa chake. Kuziva Jehovha kunosanganisira kunyatsoda Jehovha uye vatinonamata navo. Bhaibheri rinotsanangura kuti: “Uyo asina rudo haasati asvika pakuziva Mwari.” (1 Joh. 4:8) Saka kuziva Mwari kunosanganisira kumuteerera. (Verenga 1 Johani 2:3-5.) Chokwadi kuziva Jehovha iropafadzo yakakura chaizvo! Asi ukama ihwohwo hunogona kupera, sezvakaitika kuna Judhasi Iskariyoti. Ngatishandei nesimba kuti tirambe tiine ukama ihwohwo. Kana tikadaro tichawana chipo choupenyu husingaperi.—Mat. 24:13.
“NOKUDA KWEZITA RENYU”
8, 9. Chii chainyanya kukosheswa naJesu paaiita ushumiri hwake panyika, uye itsika ipi yechitendero yaanofanira kunge akaramba?
8 Patinoverenga munyengetero waJesu uri muna Johani chitsauko 17, tinoona kuti chokwadi Jesu ainyatsoda vaapostora vake uye vaya vaizova vadzidzi vake munguva yemberi. (Joh. 17:20) Asi tinofanirawo kunzwisisa kuti chinangwa chikuru chaJesu chaisava chokutiponesa. Chinangwa chake chikuru kubvira paakatanga ushumiri hwake hwepanyika kusvikira paakapedza, chaiva chokutsvenesa uye kukudza zita raBaba vake. Somuenzaniso, paakataura zvaakauyira panyika musinagogi kuNazareta, Jesu akaverenga mupumburu waIsaya achiti: “Mudzimu waJehovha uri pandiri, nokuti akandizodza kuti ndizivise mashoko akanaka kuvarombo.” Hapana mubvunzo kuti Jesu anofanira kunge akadudza zita raMwari zvakajeka paakaverenga mashoko aya.—Ruka 4:16-21.
9 Pachiine makore Jesu asati auya panyika, vatungamiriri vechitendero chechiJudha vaidzidzisa vanhu kuti vasashandisa zita raMwari. Tinogona kuva nechokwadi chokuti Jesu akaramba tsika iyi isingabvi mumagwaro. Akaudza vaya vaimupikisa kuti: “Ndakauya muzita raBaba vangu, asi hamundigamuchiri; kudai mumwe munhu aisvika muzita rake oga, maizogamuchira iyeye.” (Joh. 5:43) Uye kwasara mazuva mashoma kuti afe, Jesu akataura zvaainyanya kukoshesa muupenyu achinyengetera kuti: “Baba, kudzai zita renyu.” (Joh. 12:28) Saka hazvifaniri kutishamisa kuti nyaya yokukudzwa kwezita raBaba vake inoramba ichidzokororwa mumunyengetero watiri kuongorora.
10, 11. (a) Kuzivisa kwakaita Jesu zita raBaba vake kwaisanganisirei? (b) Vadzidzi vaJesu vanofanira kuva nechinangwa chei pabasa ravo?
10 Jesu akanyengetera kuti: “Ndakaratidza vanhu vamakandipa panyika zita renyu. Vakanga vari venyu, mukandipa, uye vakachengeta shoko renyu. Uyewo, handichisirizve munyika, asi ivo vari munyika uye ini ndiri kuuya kwamuri. Baba Vatsvene, vatarisirei nokuda kwezita renyu ramakandipa, kuti vave vamwe sezvatiri.”—Joh. 17:6, 11.
11 Kuita kuti vadzidzi vazive zita raBaba vake kwaisareva kungoritaura chete. Jesu akavabatsirawo kuziva zvaraireva, izvo zvaisanganisira unhu hwaMwari hwakanaka chaizvo uye mabatiro aanotiita. (Eks. 34:5-7) Uyewo Jesu zvaava nechinzvimbo chakakwirira kudenga, anoramba achibatsira vadzidzi vake kuti vazivise zita raJehovha munyika yose. Nechinangwa chei? Chokuti vadzidzi vakawanda vaunganidzwe nyika ino yakaipa isati yaguma. Chokwadi Jehovha achaita kuti zita rake rinyatsozivikanwa paachanunura zvapupu zvake zvakavimbika!—Ezek. 36:23.
“KUTI NYIKA ITENDE”
12. Zvinhu zvipi zvitatu zvinodiwa kuti tibudirire pabasa redu rinoponesa upenyu?
12 Jesu paaiva panyika, akashanda nesimba kuti abatsire vadzidzi vake kuti vasakundwa nemiedzo. Izvi zvaikosha kuti vakwanise kupedza basa raainge atanga. Jesu akanyengetera kuti: “Sezvamakandituma munyika, iniwo ndinovatuma munyika.” Kuti vabudirire pakuita basa iri rinoponesa upenyu, Jesu akasimbisa zvinhu zvitatu zvinokosha. Chokutanga, akanyengetera kuti vadzidzi vake vasave venyika yaSatani yakaipa. Chechipiri, akanyengetera kuti vatsveneswe nokushandisa chokwadi cheShoko raMwari. Chechitatu, akakumbira kakawanda kuti vadzidzi vake vabatane sekubatana kwaainge akaita naBaba vake. Izvi zvinoita kuti tide kuzviongorora. Mumwe nemumwe wedu anofanira kuzvibvunza kuti, ‘Ndiri kuita zvinoenderana nezvikumbiro zvitatu zvaJesu here?’ Jesu paakataura zvinhu izvi akaratidza kuti aiva nechivimbo chokuti ‘nyika yaizotenda kuti akatumwa naMwari.’—Verenga Johani 17:15-21.
VaKristu vepakutanga vakabvuma kubatsirwa nemudzimu mutsvene kuti varambe vakabatana (Ona ndima 13)
13. Munyengetero waJesu wakapindurwa sei munguva yevaKristu vepakutanga?
13 Tinogona kuona kuti munyengetero waJesu wakapindurwa kana tikaongorora bhuku reBhaibheri raMabasa Evaapostora. Ungano yevaKristu vepakutanga yaiva nevaJudha, vanhu vamamwe marudzi, vapfumi nevarombo, varanda nevanhu vaiva nevaranda. Chimbofunga kuti zvaiva nyore sei kuti ungano iyoyo isabatane. Asi vose vainge vakabatana chaizvo zvokuti vaigona kufananidzwa nenhengo dzemuviri womunhu, Jesu ari iye musoro. (VaEf. 4:15, 16) Chokwadi kubatana uku kwaiva chinhu chinoshamisa munyika yaSatani isina kubatana! Jehovha ndiye anofanira kukudzwa nokuti ndiye akaita kuti zvikwanisike achishandisa mudzimu wake mutsvene une simba.—1 VaK. 3:5-7.
Munyika yose vanhu vaJehovha vakabatana (Ona ndima 14)
14. Munyengetero waJesu wave uchipindurwa sei mazuva ano?
14 Zvinosuwisa kuti vaapostora pavakafa, kubatana ikoko kunoshamisa hakuna kuramba kuripo. Sezvakagara zvataurwa, kutsauka pakutenda kwakatanga, zvikaita kuti pave nemapoka echiKristudhomu asina kubatana. (Mab. 20:29, 30) Asi mugore ra1919, Jesu akasunungura vateveri vake vakazodzwa padzidziso dzenhema ndokuvaunganidza kuti vave nechisungo “chakakwana chokubatana.” (VaK. 3:14) Basa ravo rokuparidza rakaguma nei? Rakaita kuti “mamwe makwai” anopfuura mamiriyoni manomwe anobva “kumarudzi ose nemadzinza nevanhu nendimi” auye kuti azobatana nevakazodzwa kuva boka rimwe chete. (Joh. 10:16; Zvak. 7:9) Iyi imhinduro inoshamisa yemunyengetero waJesu, “kuti nyika izive kuti [imi Jehovha] makandituma uye kuti makavada sokundida kwamakaita”!—Joh. 17:23.
MHEDZISO INOBAYA MWOYO
15. Jesu akakumbirirei vadzidzi vake vakazodzwa?
15 Manheru iwayo aNisani 14, Jesu ainge akudza vaapostora vake nokuita navo sungano yokuti vatonge pamwe chete naye muumambo hwake. (Ruka 22:28-30; Joh. 17:22) Saka Jesu akanyengeterera vose vaizova vateveri vake vakazodzwa kuti: “Baba, kana vari vamakandipa, ndinoda kuti, pandinenge ndiri, ivowo vave neni, kuti vaone kukudzwa kwangu kwamakandipa, nokuti makandida nyika isati yavambwa.” (Joh. 17:24) Izvi hazviiti kuti mamwe makwai aJesu anzwe godo asi zvinotoita kuti afare uye zvinoratidzawo kuti vaKristu vose vechokwadi vari panyika mazuva ano vakabatana.
16, 17. (a) Jesu paaipedzisa munyengetero wake akataura kuti aizoramba achiitei? (b) Tinofanira kutsunga kuitei?
16 Vanhu vakawanda vari munyika vanoramba uchapupu huri pachena hwokuti Jehovha ane vanhu vakabatana vanonyatsomuziva. Vanodaro nemhaka yokuti ndizvo zvavanodzidziswa nevatungamiriri vavo vezvitendero. Izvozvo ndizvo zvaiitikawo munguva yakararama Jesu. Saka paainyengetera akapedzisa nemashoko okuti: “Baba Vakarurama, chokwadi, nyika haina kusvika pakukuzivai; asi ini ndakasvika pakukuzivai, uye ava vakasvika pakuziva kuti makandituma. Ndakavazivisa zita renyu uye ndicharizivisa, kuti rudo rwamakandida narwo ruve mavari uye ini ndive pamwe navo.”—Joh. 17:25, 26.
17 Ndiani angaramba kuti Jesu akaita zvinoenderana nemunyengetero wake? Sezvo ari musoro weungano, anoramba achitibatsira kuzivisa zita raBaba vake uye zvinangwa zvavo. Dai tikaramba tichizviisa pasi pake nokushingaira kuita zvaakarayira zvokuti tiparidze uye tiite kuti vanhu vave vadzidzi. (Mat. 28:19, 20; Mab. 10:42) Dai tikashandawo nesimba kuti tirambe takabatana sevanhu vaMwari. Kana tikaita izvi, tinenge tichiita zvinoenderana nemunyengetero waJesu, zvichizoita kuti zita raMwari rikudzwe uye kuti tifare nokusingaperi.